ओडीआईमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपालका तीन खेलाडी | Hamro Khelkud
ओडीआईमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपालका तीन खेलाडी
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालले जिम्बावेमा सम्पन्न एकदिवसिय विश्वकप छनोटमा आठौं स्थानमा रहेर गत मार्च १५ मा चार वर्षको लागि वान डे अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता पाएको थियो ।
अगस्ट १ मा नेदरल्यान्डसँग ओडीआई डेब्यू गरेको नेपालले हालसम्म ३ खेल मात्र खेलेको छ । नेदरल्यान्डसँग २ र युएईसँग १ ओडीआई म्याच खेलिसकेकोछ । त्यस्तै जनवरी २५ देखी २८ सम्म यूएईसँग ३ वान डे खेल उसैको घरेलु मैदानमा खेल्ने छ । युएईसँग ३ खेलपछि नेपाल आईसीसीको विश्व वान डे वरियतामा पनि आउने छ ।
नेपालबाट वान डे क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने ३ खेलाडी :
१. दिपेन्द्रसिंह ऐरी
दिपेन्द्र सिंह ऐरी नेपालबाट वान डे क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान हुन् । मिडिल अडरका भरपर्दा युवा खेलाडी ऐरीले ३ वान डे खेलमा ९२ रन जोडेका छन् । ७१.३१ को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्दै ७ चौका र १ छक्का प्रहार गरेका छन् । उनले नेदरल्यान्डसाग डेब्यूमा ३३ र दोस्रो खेलमा १९ रन जोडे । त्यस्तै युएईविरुद्ध ४० रन बटुलेका थिए ।
२. सोमपाल कामी
तीव्र गतिसँगै तल्लोक्रममा ब्याटिङ गर्ने सोमपाल कामी ओडीआई क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुन् । उनले ३ खेलमा ९८.८७ को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्दै ८८ रन जोडेका छन् । ४ छक्का र ६ चौका उनको कुल रनमा समावेश छ । डेब्यू खेलमा नेदरल्यान्डसाग डक आउट हुन पुगेका सोमपालले दोस्रो खेलमा ६१ रन जोडे । युएईसागको खेलमा २७ रनमा नट आउट रहे ।
कप्तान पारस खड्का सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचिमा तेस्रो स्थानमा छन् । पारसले ३ वान डे मा ७९ रन जोडेका छन् । जस्मा १० चौका र २ छक्का समावेश छ । ७१.८१ स्ट्राइकरेटमा ब्याटिङ गरेका पारसले नेदरल्यान्डसाग डेब्यूमा १२ र दोस्रो खेलमा ५१ रन प्रहार गरे । युएईसाग पारसले १६ रन मात्र बनाउन सके ।